Rabshado dad ku dhaawacmeen oo ka qarxay Gaarisa iyo Dawlada Kenya oo ciidan dheeraad u dirtay | RBC Radio
Rabshado dad ku dhaawacmeen oo ka qarxay Gaarisa iyo Dawlada Kenya oo ciidan dheeraad u dirtay
Posted on August 10, 2017 RBC, Wararka, Warbixin
Nairobi (RBC Radio) Rabshado ayaa ka qarxay magaalada Gaarisa ee ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya maanta kadib markii natiijada doorashadii Talaadadii ka dhacday dalka Kenya lagu murmay.
Rabshadaha ayaa qarxay kadib markii taageerayaasha guddoomiyihii hore ee Gaarisa Nadiif Jaamac oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ay ka hor jeesteen natiijada doorashada oo la sheegay inuu ku guuleystay musharaxa xisbiga Jubilee Cali Qorane, kaasoo illaa hadda ku horreeya codadka jagada guddoomiyaha maamulka Gaarisa.
Sidoo kale Faarax Macalim oo ahaa musharrax jagada xildhibaanka baarlamaanka ee Gaarisa ayaa isaguna cambaareeyay kadib markii guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqeen in Aadan Barre Ducaale oo ka socday xisbiga Jubilee uu ku guuleystay natiijada doorashada kursiga xildhibaanka.
Rabshadaha ayaa sii xoogeystay kadib markii dad careysan ay dab qabadsiiyeen suuqa ugu weyn Gaarisa ee Suuq Mugdi.
Labo ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen rabshada kadib markii dad dhagxaan ku tuuraya dhismayaasha iyo gawaarida ay magaalada qabsadeen.
Wararka hadda na soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidamada booliska Kenya ee ku sugnaa magaaalada ay xakameyn waayeen dadka rabshada wada, taasina ay keentay inay dalbadaan ciidamo dheeraad ah oo ay ka dalbadaan deegaanada kale ee u dhow Gaarisa.
Rabshadaha daba socda muranka doorashada dalka Kenya ayaa bilawday maalintii shalay, kadib markii musharraxa isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu diiday natiijada hordhaca ee doorashada guud isagoo shaaciyay in nidaamka computerada guddiga doorashada ee natiijada ay ka soo baxaysay la jabsaday.
Guddiga doorashada ayaa xubno ka mid ah ay beeniyeen sheegashada Mr. Odinga, iyagoo sheegay inay baareen eedeynta oo ay cadeyn waayeen.